Umthetho oMtsha obiza iNkomfa ye-White House ngokutya unconyiwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Umthetho oMtsha obiza iNkomfa ye-White House ngokutya unconyiwe
I-Academy of Nutrition and Dietetics ibulela i-US Rep. UJim McGovern (Mass.) kunye ne-US Sen. Cory Booker (NJ) ngokukhokela iinzame zomthetho zokudibanisa inkomfa ye-White House egxile ekutyeni, ukutya, indlala kunye nempilo.
“I-Akhademi ibongoza iNkongolo ukuba yongeze inkxaso yayo kulo mthetho uyilwayo we-bicameral. Le ngqungquthela iya kuba linyathelo elifunekayo kakhulu lokujongana nendlala kunye nokungakhuseleki kwesondlo e-United States, "kusho i-dietitian nutritionist ebhalisiweyo kunye noMongameli we-Academy uKevin L. Sauer.
“Sele ingaphezu kwesiqingatha senkulungwane ukusukela oko i-White House ihlanganise inkomfa ezinikele kule miba ibalulekileyo,” utshilo uSauer. "Namhlanje, kufuneka sisebenzisane ukudala izisombululo zanamhlanje zokungakhuseleki kokutya kunye nesondlo ukuqinisekisa ukuba iintsapho ziyafikelela ekutyeni okunempilo nokunesondlo."
Ngo-1969, inkomfa yokuqala kunye neyokuphela kweNdlu ye-White House malunga nokutya, isondlo, indlala kunye nempilo yabizwa, ekhokelela kutyalo-mali olubalulekileyo ekudalweni nasekukhuliseni iinkqubo izigidi zabantu baseMelika abasathembela kuyo namhlanje, kubandakanywa neNkqubo yoNcedo lweZondlo, i-Special Supplemental Nutrition. Inkqubo yabasetyhini, iintsana kunye nabantwana kunye neNkqubo yeSizwe yesidlo sakusasa kunye nesidlo sasemini esikolweni.
Emva kwesikhumbuzo seminyaka engama-50 yenkomfa yokuqala, iAkhademi yadibana neminye imibutho ekubizeni enye inkomfa.
“Isondlo sidlala indima ebalulekileyo kuwo onke amanqanaba obomi kwaye sixhasa impilo, impilo entle kunye nokuphucula umgangatho wobomi. I-Academy ingumxhasi ozingcayo wemigaqo-nkqubo ephucula impilo kunye nokunciphisa ukungakhuseleki kokutya e-United States nakwihlabathi jikelele, "utshilo uSauer.